ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုအား မြန်မာအစိုးရမှ အကွက်ချ စီစဉ်ခဲ့လေသလား။ ~ Zarni's Blog
ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုအား မြန်မာအစိုးရမှ အကွက်ချ စီစဉ်ခဲ့လေသလား။
Saturday, December 22, 2012 Translated Article No comments
အောက်တိုဘာ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂
ဆောင်းပါးရှင် – မောင်ဇာနည်
ဒီနှစ်နွေ၌ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်း ကို လေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည် အစိုးရအား ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို ကိုင်တွယ်ပုံနှင့်ပက်သက်၍ စောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရသည်။ နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရောက်ရှိနေသော ပြည်တွင်းလုံခြုံရေး စစ်တပ်တို့သည် “လူသားဆန်မှု့ နှင့် လူသားအကျိုးပြုမှု့” ဆိုသည့် အချက်နှစ်ချက်အား အပေါ်ယံဟန်ပြ လုပ်ဆောင်နေသည် ဟု နိုင်ငံပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများမှ ဖိအားပေးလျှက်ရှိသည်။
နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူများအား ရေပေါ်ဆီ မမှန်မကန် ထုတ်ပြန်မှု့များ ထက် ရှု့ထောင့်ပေါင်းစုံမှ လေ့ လာ တွေ့ရှိချက်များအရ ညမထွက်ရ အမိန့်ကြောင့် မသေရုံတမည် ခက်ခဲစွာနေထိုင်ဒုက္ခရောက်နေကြသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့ အား ပိုမို ဒုက္ခရောက်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း ရိုဟင်ဂျာ တို့ က စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု့ နှင့် ဖိနှိပ်ခံရမှု့များကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် ၄င်းတို့ ဘ၀တွင် မည်သည့်အရာမျှ ဆုံးရှုံးစရာ မကျန်သကဲ့သို့ ခံစားနေရသည်။ သို့သော်ငြားလည်း လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု့၊ လူသားအချင်းချင်းဖိနှိပ်မှု့ နှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများသည် ၄င်းတို့၏ ဘ၀များအား ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် အကျဉ်းချထားသကဲ့သို့ မလွတ်မြောက်နိုင်သော ခရီးရှည်ကြီး တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန် အမတ် Derek Mitchell အား ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အတူတကွနေထိုင်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း တရားဝင် ထပ်တလဲ လဲ ပြော ကြားခဲ့သော ရန်လိုသည့် လူများစု ရခိုင် များ က ရိုဟင်ဂျာတို့အား ၀ိုင်းရံလျက်ရှိသည်။ အဆိုးရွားဆုံးမှာ မူကား အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးနေရသော ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ အား ခိုလှုံခွင့် မပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာ တို့ ၏ ဘက်မှ လေ့လာ ကြည်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်များ၏ ဖိနှိပ်မှု့ ပင်လယ်ထဲတွင် မျောနေကြရသော ၄င်းတို့ အတွက်မှာ မူကား နေပြည်တော် သမ္မတရုံးအပါအ၀င် အခြားသော စုံစမ်းရေး အဖွဲ့များ၏ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု့များသည် ၄င်းတို့အတွက် နောက်ဆုံး ဆံခြည်တစ်မျှင်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အသေအချာ ပြောရမည် ဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် ထို စုံစမ်းမှု့များအပေါ်တွင် မျှော်လင့်ချက်များစွာထားလျက် ရှိသည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် စုံစမ်းမှု့များ၏ တွေ့ရှိချက်များသည် တိုင်းပြည်၏ လူမျိုးရေးအရ နှင့် ဘာသာရေးအရပါ အဖိနှိပ်ခံရဆုံးသော ၄င်းတို့၏ လမ်းဆုံး ရောက်နေမှု အနေအထားကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မွေးဖွားခဲ့သည့် နိုင်ငံ၊ ၎င်းတို့မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံ (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ တရားဝင် နိုင်ငံသားဖြစ်စေရေး ၊ လူတန်းစေ့ လုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်စေရေး နှင့် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး တို့ရရှိရန် တို့အတွက် လည်း အစပျိုး လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေများအပေါ်တွင် နောက်ထပ်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှု့များနဲ့ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေသေးပါ သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရ အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မသေချာ မရှင်းလင်းမှု့များ ရှိခဲ့သောကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါသည်။
အရေးကြုံလာပြီဆိုလျှင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလည်း အသုံးချခံအနေဖြင့် ပြု လုပ်ခြင်းက စပြီး နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသော ပြည်သူနှစ်သန်းကျော်အား လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု့ အကူအညီများ အား ပိတ်ပင်သလို ၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတွင် ရဟန်းများ ဆန္ဒပြမှု့များ ကဲ့သို့သော အဖြစ်အပျက်များ အပေါ်တွင် စစ်အစိုးရ၏ အကွက်ကျကျ လိမ်ခြင်း၊ အမှန်အား မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံခြင်း ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အမြင်များ အပေါ်တွင် ဥပက္ခာ ပြုခြင်းတို့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် လွန်စွာ ပူပန်လျက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံရေးနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ တွေ့ရှိလေ့လာချက်များအရ ရိုဟင်ဂျာ ဓါးစာခံများ (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့ အပယ်ခံများ အတွက်မှာမူ နိုင်ငံတကာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဟန်ပြလုပ်ဆောင်နေသော နေပြည်တော် သမ္မတရုံး သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆိုးရွားဆုံးသော အဖိနှိပ်ခံလူမျိုးစုတို့၏ အခြေအနေကို ချက်ချင်း ဆိုသလို ကာကွယ်ပေးရန် တာဝန် ရှိကြောင်း နှင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်လူမျိုးရေး ဘာသာရေးခွဲခြား ခံနေကြရသော ရိုဟင်ဂျာတို့ ရပ်တည် မှု အား တရားဝင် လူသိထင်ရှားစေရန် ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီရယူပြီး OIC နှင့် US စုံစမ်းရေး အဖွဲ့တို့က ထုတ်ပြန်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ငြားလည်း ပြည်တွင်းနေထိုင်သူ များက သမ္မတသိန်းစိန်၏ စစ်အစိုးရသည် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း နှင့် ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် လူမျိုးကြောက်ရောဂါ တို့ ဖြစ်လာစေရန် လုပ်ကြံလှည့်ဖျားသည်ဟု သံသယရှိနေကြသည်။
ရခိုင်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာများ၊ ရဲများ၊ ဒေသခံမျက်မြင်သက်သေများ နှင့် အဓိကရုဏ်း၏ သားကောင် ရိုဟင်ဂျာများ နှင့်တွေ့ဆုံ စကားပြောခွင့်ရသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူများရဲ့ မကွယ်မ၀ှက်တမ်း စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်များသည် ရိုဟင်ဂျာတို့ အပေါ် သံသယဖြင့် စွပ်စွဲ ပြောဆိုမှု့များအတွက် မဖုံးကွယ်နိုင်သော တိကျသော သက်သေခိုင်မာမှု့ အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။
သိန်းစိန် အစိုးရ၏ ဤလူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းအပေါ် တရားဝင် ပြောကြား ချက်များတွင် ယခုထက်တိုင် လူသိရှင်ကြား မထုတ်ဖော်ဘဲ ထိန်ချန်လျှို့ဝှက်ချက်များသည် ပိုမို ဆူပူမှု့ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရင်းများဖြစ်သည်။
ပိုမိုဆိုးရွားသည်ကား NLD ပါတီဝင်များနှင့် အတူသွားရောက်ခဲ့သော အမေရိကန် ခရီးစဉ် အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းအပေါ် နေပြည်တော်ရုံး၏ မဟုတ်မမှန် ဖော်ပြချက်များကိုသာ ထပ်တလဲလဲ ပြောကြားခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်းအပေါ် တာဝန်ရှိမှုကိစ္စသည် “လျှို့ဝှက်ချက်” အဖြစ်သာ ကျန်နေခဲ့ပေသည်။
သူမသည် ပို၍ သိသင့်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် ကျွန်တော်၏ နိုင်ငံတွင်း လေ့လာ သုတေသနပြုသူများဖက်မှ တွေ့ရှိတင်သွင်းသော အချက်အလက်များအရ (၁၉၆၂) တွင် စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းယူစဉ်ကတည်းက အဆိုးရွားဆုံးသော လူမျိုးရေး-ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများဖြစ်လာစေရန် နေပြည်တော်ရုံးမှ တမင်တကာ အကွက်ဆင် ကြံဆောင်နေသည်ကို ဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်။
အစကနေပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျှင် ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များသည် နေပြည်တော်ရုံးသို့ မကွယ်မ၀ှက်တမ်း ပွင့်လင်းစွာ ဘာကြောင့် ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်းဖြစ်သလဲ ဘယ်လို စတင်ဖြစ်ပွားသလဲဆိုတာတွေကို မေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဇွန်လ (၄) ရက်နေ့တွင် Ministry of Borders affairs မှ ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၏ “မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလက်ရှိအခြေအနေ” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မသီတာထွေးအား မွတ်စလင်အမျိုးသား သုံးဦးမှ မုဒိမ်းကျင့်သည်ဟူသော မဖော်ပြအပ်သည့် သတင်းအားဖော်ပြလိုက်ခြင်းသည် နောက်ငါးရက် အကြာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပြဿနာဖြစ်ပွားစေရန် အစပျိုးပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်မှာမူ မြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများက ဒေသခံမဟုတ်သည့် ဘာသာရေးကိစ္စဖြင့်လာရောက်သော မွတ်စလင် ခရီးသွားဆယ်ယောက်အား ဘတ်စကားပေါ်မှ ဆွဲချကာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် အချိန်၌ မသေမချင်း ရိုက်သတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကွဲပြားစွာတွေ့ရှိချက်များ အရ မသီတာထွေး အသတ်ခံရသောကိုယ်ခန္ဓာတွင် မုဒိမ်းမှု့ကျူးလွန်ထားခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်းနဲ့ မုဒိမ်းမှု့မြောက်ကြောင်း အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ် ထိုးခိုင်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ မှု့ခင်းဆရာဝန်က ကျွန်တော့် သုတေသနပြု သူများထဲမှ တစ်ဦးကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန သည် ဘာကြောင့် တရားခံသုံးယောက်ကို မွတ်စ်လင်မ်များဟု မဟုတ်မမှန် ရေးသားဖော်ပြပြီး အမှန်တကယ်တမ်းတွင် တရားခံ ထက်ထက်ဆိုသူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေသည်ကို ဘာကြောင့်မဖော်ပြခဲ့တာပါလဲ ?
နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်း မသီတာထွေးသည် အသတ်မခံရခင်နဲ့ပစ္စည်းများလုယက်မခံရခင်မှာ မုဒိမ်းကျင့်ခံရပါတယ်လို့ ထင်ထင်ရှားရှားမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဒီ မှားယွင်းသောဆေးစစ်ချက်ကို လည်း ဘာကြောင့်ဖော်ပြရတာလဲ?
မုဒိမ်းမှု့ဆိုသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင်ဖြစ်နေကျဖြစ်သော အလွန်ဆိုးဝါးသော ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတော့ ရာဇ၀တ်မှု့ အားလုံးထဲမှာ ဒီမုဒိမ်းမှု့ဆိုတာ အဆိုးဝါးဆုံးသော ရာဇ၀တ်မှု့ပါ။ မုဒိမ်းမှု့ ကျူးလွန်သူသည် အမြဲတမ်းအပြစ်တင်ခံနေရပေသည်။ တစ်ခါထောင်ကျပြီဆိုသည်နှင့် အခြားထောင်သားများက ထို မုဒိမ်းမှု့ ကျူးလွန်သူအား အမြဲတမ်းရန်ရှာ အနိုင်ကျင့်နေပေတော့သည်။
၄င်းအပြင် “မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသားသုံးဦးမှ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးအား မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ” ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သေချာစွာ စုံစမ်းထားခြင်းမရှိသော သတင်းအား အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ဇွန်လ (၄)ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နောက်ကွယ်တွင် ဘာအကျိုးအမြတ်များ ရှိမည်လဲ?
ပို၍ဆက်စပ် လေ့လာလိုက်သောအခါ တရားခံ ထက်ထက်တစ်ယောက် သူ့၏ အမှု့စစ်မည့်ရက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း အချုပ်ခန်း၌ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် သတ်သေသွားပါသည်ဟု မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်များနဲ့ အချုပ်ခန်းများသည် လူတစ်ယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေရလောက်အောင် အနေအထားတွေမရှိပါဘူး။ ဟိုးအရင် နိုင်ငံရေးမှု့နဲ့ထောင်ကျဖူးတဲ့ ထောင်သား ထောင်ပေါင်းများစွာတို့က ထောင်သံတိုင်နောက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထွက်ဆိုပေးကြပါလိမ့်မည်။
သမ္မတ သိန်းစိန်အစိုးရသည် ရိုဟင်ဂျာ-ရခိုင် အရေးအခင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွင်း ကျော်ကြားသော နိုင်ငံရေးနှင့် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် များပါဝင်သော ကော်မရှင် အဖွဲ့ဖွဲ့ပေးပြီး သုံးရက်အကြာတွင် ထက်ထက်၏ အမျိုးသမီးအလောင်းအား ရေတွင်းထဲ၌ တွေ့ရှိရလေသည်။ သူမသည် ရေတွင်းထဲသို့ မတော်တဆ ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ် ခဲ့လေသလား ဒါမှမဟုတ် အခြားလိမ်လည်မှု့တစ်ခုခုများ ရှိလေမလား ?
နောက်ထပ်၍ ဌာနဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများ၏ တရားဝင်ပြောကြားချက်များအရ ယခုကဲ့သို့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်များရဲ့ ဘာသာရေးခရီးမှ ပြန်လာသော မွတ်စလင်မ် (၁၀)ဦးအား ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့တွင် ရိုက်သတ်လိုက်သောဖြစ်ရပ်သည် မေလ (၂၈)တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးအား မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်မှု့အတွက် ကလဲ့စားချေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည် ရောက် လေ့လာစုံစမ်းသူများရဲ့ ဒေသခံ မျက်မြင်သက်သေများအပေါ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များအရ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့တွင် လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ခရီးသွားဘတ်စ်ကား စုစုပေါင်း ခြောက်စီးရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ၄င်းပြင် မြန်မာ့သတင်းအဖွဲ့၏ ဇွန်လ (၄)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် လူပေါင်း (၃၀၀)က တိုက်ခိုက်သည်ဆိုသည့် ခန့်မှန်းဖော်ပြချက်အရ မည့်သည့် ဘတ်စ်ကားအား အကြမ်းဖက်မည်ဆိုသည် ကို အတိအကျ သိရှိပုံရပါသည်။
မကြာသေးမီက ကျွန်တော် မြန်မာပြည်သို့ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလူဆယ်ယောက်ကို သတ်တဲ့သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် မဖမ်းရသလဲ ၊ ဖမ်းဖို့ မကြိုးစားရသလဲလို့လဲ မေးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်း အာဏာပိုင်များက ရခိုင်များက ရဲတွေရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု့မှန်သမျှမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအပြစ်မဲ့သော လူဆယ်ယောက် အား သတ်ဖြတ်မှု့ ပါဝင်ပါတယ်လို့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ သတင်းပေးဖော်ထုတ်ပြောကြားလိမ့်မှာ မဟုတ်ကြောင်းလည်း သိလိုက်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ဖမ်းဆီးထောင်ချစဉ်က ဘာမျက်မြင်သက်သေမှ မလိုခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရအနေဖြင့် သမရိုးကျမဟုတ်သော အဖြစ်အပျက်များကိုတောင် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း ၊ ဗွီဒီယိုရိုက်ခြင်းတွေဆိုတာ လုပ်နေကြပါ။ (၂၀၀၅) ခုနှစ်နဲ့ (၂၀၀၆) ခုနှစ်တွင် ကျွန်တော် ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွင် စစ်အစိုးရ၏ ဧည့်သည် အဖြစ်ရောက်ရှိစဉ်က နံနက်တိုင်း လူငယ်ပိုင်း စုံထောက်များသည် လွယ်အိတ်များတွင် ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများထည့်၍ ဈေးများ ၊ ကားမှတ်တိုင်များ ရထားဘူတာရုံများ နှင့် အခြားရာဇ၀တ်မှု့ ဖြစ်ပွားနိုင်ရာနေရာများကို အသီးသီးထွက်ခွာသွားတာကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် မြင်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပိုင်များက ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လမ်းပေါ်မှာ လူတွေကို ရိုက်သတ်နေတာကို ရဲတွေနဲ့ စုံထောက်တွေ အသေအချာ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အခြေအနေတွေ ရှိနေပါလျက် အာဏာပိုင်များက ဘာကြောင့် ဓါတ်ပုံသက်သေ ဒါမှမဟုတ် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း တစ်ခု မှ မရှိရတာလဲ ? တရားခံတွေကို အဲ့ဒီ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာတွေ ဗွီဒီယိုတွေက နေ တဆင့် ချက်ချင်းခြေရာခံ ဖမ်းမိနိုင်ခြေအများဆုံးပါ။
နေပြည်တော်ရုံးရဲ့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် စစ်အစိုးရဟာ တရားမျှတမှု့ကို လုံးဝမလိုလားသည်မှာ အကြမ်းဖက်ခံရသော မွတ်စ်လင်မ်များရဲ့အခြေအနေကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် ဒီလူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားသော ၄င်းတို့၏ Riot Inquiry Commission ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များကိုတောင် လျစ်လျူရှု့ လျက်ရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သူ၏ သမ္မတရုံး အရာရှိများသည် မည်မျှ ခိုင်မာ ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းနှင့် ထို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းကိုလည်း ဟန်ပြ ပြော ဆိုခဲ့သည်။
ထို Commission ရဲ့အနီးကပ် စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်များအရ ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ်တွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေး အင်အား အကန့်အသတ်မရှိ တိုးချဲ့ထားရှိဖို့ Commission ရဲ့တောင်းဆိုမှု့ကိုလည်း အစိုးရမှ ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရသည် ရခိုင်များ နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အပေါ်တွင် တာဝန်ပျက်ကွက်လျက်ရှိပြီး ရခိုင်အမျိုးသမီး အား မုဒိမ်းကျင့်လူသတ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အချုပ်ကျနေသော မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသားနှစ်ဦးအကြောင်းကိုလည်း ထိန်ချန်ထားပါတယ်။
အစိုးရသည် နေပြည်တော်မှ နေ၍ လုံခြုံရေးအင်အားများတိုးချဲ့ရမည့်အစား မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှ အဓိကရုဏ်းအား ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့အပါအ၀င် အခြားသော မြို့များသို့ ပြန်နှံ့စေခြင်းအားဖြင့်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၄င်း၏ အမှု့ပိတ်ရက်မတိုင်မီ အခြေအနေကို ပိုမို ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသွားစေသည်။
သိန်းစိန်အစိုးရသည် ၄င်း၏ တရားဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု့ကော်မရှင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း၏ ဇစ်မြစ် အကြောင်းအရင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် စုံစမ်းမှု ပြုရန် အဆုံးအဖြစ် ပေးသည့်အသွင် ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒေသတွင်းရောက် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် သမ္မတ သိန်းစိန် အစိုးရ၏ တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန် ဒုနှင့်ဒေးကိစ္စရပ်များကို တူးဆွ ဖော်ထုတ်ရုံသာမက ဘယ်လို မဟုတ်မမှန်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။
ပိုပြီး အသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင် အစိုးရသည် ပြည်တွင်းရော ပြည်ပက ပါ တိုက်ရိုက် ပါဝင် စွက်ဖက်တာကို မလိုလားပါဘူး။ တနည်းဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာထောင်နဲ့ချီ အနိုင်ကျင့်ခံနေရတာတွေ ၊ ရိုဟင်ဂျာတွေနေထိုင်ရာ အိမ်တွေကို မီးရှို့နေတာတွေကို လုံခြုံရေးရှိလျက်နဲ့ သိသိကြီး လုပ်ခွင့်ပြုရုံမျှမက ၊ ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီ အဓိကရုဏ်းမီးကိုလည်း မွှေးပေးနေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် က ကျွန်တော့်ကို ယခုလို တရားဝင်ပြောခဲ့ပါတယ် ။ “အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာ မွတ်စ်ကို မှ မလိုချင်တာပါ၊ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို သတ်ဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်သေးဘူး” လို့ ၄င်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နေပြည်တော် အစိုးရအနေဖြင့် မလိုလားသော ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စ်လင်များကို ရှင်းလင်း သုတ်သင်ရန် ရခိုင်အစွန်းရောက်များကို တရားဝင် တာဝန်ကြီး ပေးလိုက်ပြီလား?
တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲစဉ် ကာလအတွင်း ဆိုးဝါးသော လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ မည်မျှပင် အမျိုးမျိုးသော စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ရှိရှိ OIC နှင့် မြန်မာ့ Presidential Riot Inqurity Commission တို့သည် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာစုံထောက်များနဲ့  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း လိုလိုလားလားတောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်၍ သူတို့ အနေဖြင့် သမ္မတ သိန်းစိန် အစိုးရ သည် ထို စုံစမ်းလေ့လာသူများအပေါ်တွင် လုံခြုံရေး အပြည့်အ၀ချထားရန် ၊ အထူးသဖြင့် ဗမာ ဒေသခံတို့အနေဖြင့် ၊ ဒေသခံ ရခိုင်များနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ အား တန်းတူညီမျှ လုံခြုံရေးထားရှိပြီး အင်တာဗျူးတွေ့ဆုံမှု့ပြုလုပ်ရန် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထား သက်သေ စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရန်တို့အတွက်လည်း ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
ယခုအခါတွင်မူကား နိုင်ငံရေးအရေခြုံ စစ်အစိုးရနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု့ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များလက်တွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီး က ပါ သူတို့ ကို အမှန်တကယ် စွန့်ပစ်သွားသလားဟု ခံစားနေကြရရှာသော ရိုဟင်ဂျာ တို့ အတွက် နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တားဆီးပိတ်ပင်နေသော ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရတို့သည် အများ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံနေရပေသည်။ အကယ်၍သာ စုံထောက်များက မျှော်လင့်ချက်မဲ့လျက်ရှိသော အိမ်ခြေမဲ့နေသော အကြီးအကျယ် လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှု့တို့ဖြင့်ရင်ဆိုင်မှု့နေကြရသော ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အခြေအနေများကို တွေ့ရှိဖော်ထုတ်ပေးမည်ဆိုပါက ကော်မရှင်များ မစ်ရှင်များ ၏ မှန်ကန်ထိမိသော စုံစမ်းမှု့များသည် ကမ္ဘာ့ လူနည်းစု အဖိနှိပ်ခံ လူတန်းစားတို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သန်းသော ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
DVB မှ ဆောင်းပါးကို M-Media မှ စီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ဆို တင်ပြပါသည်။